चीनमा नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लोकनृत्य
नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा बेइजिङ्ग डान्स ऐकेडेमी, बेइजिङ्ग, चीनद्वारा २०१७ अक्टोबर २२ देखि २७ सम्म बेइजिङ्गमा आयोजना भएको 2017 Traditional Dance Performance Show and Exchange मा सहभागिता जनाएको छ । नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट कुलपति भक्त श्रेष्ठ (सरुभक्त) को नेतृत्वमा उपकुलपति शम्भूजीत बासकोटा, प्राज्ञ उन्नती बोहरा “शीला”, प्राज्ञ माधव प्रधान, डा. घनश्याम खतिवडा, दीपक बोहरा, दिपेन्द्र कुमार बानिया, कल्पना वादी, दिपिका शर्मा, माधवप्रसाद त्रिपाठी, धनबहादुर गायक र धनबहादुर गुरुङ्ग गरी १२ जनाको कलाकार टोलीले सहभागिता रहेको थियो ।
चीनका विभिन्न प्रान्तका साथै विदेशबाट समेत सहभागिता रहेको उक्त अन्तर्राष्ट्रिय परम्परागत नृत्य महोत्सवमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतिले महत्वपूर्ण स्थान पाएको थियो । विभिन्न प्रदेशहरुबाट चयन गरिएका कलाकारहरुले कार्यक्रममा नेपालमा प्रचलित परम्परागत विवाह परम्परा, सोरठी नृत्य र पञ्चेवाजाका लोक धुनहरु प्रस्तुति गरिएका थिए । कार्यक्रमबारे उपकुलपति शम्भूजीत बासकोटाले स्थानीय टेलिभिजनहरुमा प्रकाश पार्दै साक्षात्कार गर्नुभएको थियो । विभिन्न देशका लोक तथा परम्परागत संस्कृतिहरुबारे आयोजित सेमिनारमा नेपालका तर्फबाट डा. घनश्याम खतिवडाले नेपालका परम्परागत लोक नृत्यहरुबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा दीपेन्द्रकुमार वानिया, कल्पना वादी, दिपीका शर्माले सोरठी नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए । धनबहादुर गुरुङ्ग, धनबहादुर गायक, माधव प्रसाद त्रिपाठीले सोरठी गीत र पञ्चेबाजाका मौलिक धुनहरु प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमका प्रस्तुतिहरुमध्ये नेपालको प्रस्तुति मौलिक, परम्परागत र लोक प्रस्तुति भएकोले सबैभन्दा विशेषएवम् उत्कृष्ठ रहेको कार्यक्रम आयोजकले जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रमको निर्देशन उपकुलपति शम्भूजीत बासकोटाले गर्नु भएको थियो भने कार्यक्रमको समन्वय प्राज्ञ माधव प्रधानले गर्नु भएको थियो ।
नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र बेजिङ्ग डान्स एकेडिमीबीच भेटघाट कार्यक्रम आयोजना भएको थियो । कार्यक्रममा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भक्त श्रेष्ठ (सरुभक्त), उपकुलपति शम्भूजीत बासकोटा लगायत प्राज्ञहरुको उपस्थिति रहेको थियो भने बेइजिङ्ग डान्स एकेडेमीका तर्फबाट उपकुलपति, नृत्य निर्देशक, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका निर्देशक लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । भेटघाटमा आगामी दिनमा नेपाल र चीनकाबीच सांस्कृतिक आदान प्रदानका कार्यक्रमहरु आयोजना गरिने सहमति भएको छ । उक्त छलफलमा नेपाल र चीनबीच भएको मैत्रीसम्बन्धलाई अझ गाढा बनाउन सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरुले महत्वपुर्ण हुने र दुवै देशका प्रज्ञा प्रतिष्ठानकाबीच सम्बन्ध विस्तार गरिने समेत भएको छ ।
कार्यक्रमका अवसर पारेर नेपाली सांस्कृतिक टोलीलाई चिनियास्थित नेपाली राजदुतावासले रात्रीभोजको आयोजना गरेको थियो । चीनस्थित नेपाली राजदुतावासका महामहिम राजदुत लीलामणि पोखरेलले कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै भविष्यमा पनि सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न पहल गरिने वताउनु भयो । उक्त अवसरमा कुलपति भक्त श्रेष्ठ (सरुभक्त)ले धन्यबाद ज्ञापन गर्दै भविश्यमा पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट यस प्रकारका कार्यक्रमहरु अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आयोजना गरिने वताउनु भयो ।
नेपाल र चीन बीच सदियौँदेखि रहेको साँस्कृतिक सम्बन्धलाई अझै बलियो बनाउन र नेपालको सस्कृतिलाई विश्वसामु परिचित गराउनुका साथै पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेतयस कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । विगत धेरै लामो समयदेखि नेपाल र चीनबीच सांस्कृतिक आदान प्रदानका गतिविधिहरु कम भइरहेकोमा यस कार्यक्रमले निरन्तरता दिएको छ ।